Dabaysha Geeska Iyo Somaliland: Tognaan Mise Tabnaan?! Abdifatah Ahmed Ileeye | Gabiley News Online
Dabaysha Geeska Iyo Somaliland: Tognaan Mise Tabnaan?! Abdifatah Ahmed Ileeye
Marka hore aan isla fahano tibxahan:
” Head of State/Government Diplomatic Visits, Signalling in Diplomacy and Coercive Diplomacy!”
Qaababka loo fulliyo amma loo maareeyo siyaasadda arrimaha dibaddu waa ay noocyo badan yihiin. Waxa ka mid ah in la abbuuro xidhiidh u dhaxeeya labba dal (Bilateral Relations) iyo mid u dhaxeeya labba dal iyo wixii ka badan (Multilateral Relations). Walow xidhiidhadaas ay ka shaqeeyaan safaaraddo iyo haayaddo kale oo loo xil-saaray hawlo gooni ah, hadda na kaydka cilmiga ah (Literature) ee culuumta diblomaasiyaddu waxa uu ka garaabayaa in bookhashooyinka ay sameeyaan maddaxda ugu saraysa qarramadu ay tahay ruuxda maaraynta xidhiidhka dhex mara qarramadda ( Head of State/Government Diplomatic Visits). Bookhashooyinkaasi afar arrimood ayuun baa uu ay ku soo ururaan, ka dib marka la helo caddaymaha taageeraya. Waa ta koobaad e, in uu iska yahay ‘Istusnimo iyo muuqo aan macno badani wehelin’ (Symbolic). Waa ta labaad e, kobcinta xidhiidhka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya labbada dal ( Improving Diplomatic Space). Waa ta saddexaad e, xallinta mushkilad taaggan amma u maaro-waayista mushkiladdaas lafteedda ( Addressing ‘or not’ substantive Issues). Waa ta afaraad e, Waa in ay farriin u dirayaan cid kale iyaddoo la muujinayo midnimo, siyaasad degsanayd baddalkeed IWM (Signalling).
Farriin-isu-dirka diblomaasiyaddu waa noocyo badan yahay. Waxa uu leeyahay nooc macnihiisu yahay ‘Suul-dhabaale waa haddal haddana waa si gooni ah’ (Signalling). Waa dhaqan diblomaasiyadeed xambaarra fariimaha ay isu waddaan qarramaddu amma ay u dirayaan cid kale ba, tognaan amma tabnaan. Tusaale ahaan, ka cuddur-daarashadda kulamadda, nooca amma heerka diblomaasiyiinta loo dirayo kullan amma dal kale, u yeedhis safiir amma qusul IWM. Duruufaha ay ku timaaddo ‘Signalling’ inta badan waa kuwo ka baxsan xaallaha caadiga ah sidda in labba dal ay kala goosanayaan xidhiidhkoodda diblomaasiyadeed, xallin colaadeed amma in collaad hor lihi ay abbuuranto, baddalista amma dib u qaabayn lagu sameeyo siyaasad degsanayd lana dabaqi jiray IWM.
‘Coercive Diplomacy’ waa qaab-diplomaasiyadeed ujeedkiisu yahay in dal lagu qasbo in uu baddalo qaab-dhaqankiisa dhaqaale, siyaasadeed amma falsafadeed ba iyaddoo la isticmaalayo cabsi-gelin, cunaqabatayn IWM si loo xannuunjiyo. Waxa loo dhaqan-galiyaa qaab muuqda (Explicit) iyo qaab aan muuqan (Implicit) labbada ba. Waa qaab si weyn uga hor-jeedda nooca loo yaqaano ‘Reciprocal Diplomacy’.
Bookhashooyinka dhex maray Khayre iyo Abiy, Farmaajo iyo Abiy oo ah tiraba shan kullan muddo ka yar sannad, waa calaamad weyn, ka na turjumaysa binaynta xidhiidh xaqiiqiya ase aan ahayn istusnimo (Symbolic). Waa kulamo ka turjumaya furrista xidhiidh ka duwan wixii hore, xallinta arrimo badan oo cakirnaa sidda daacad-ka-noqoshadda Ethiopia ee arrimaha Somalia siyaasad ahaan iyo ammaan ahaan ba. Waa kullamo midha-dhalkooddii la arkay; madaxdii maamul-goboleedada na ka xarrimay Addis Ababa iyo u kala dheerayntii maddaxda Ethiopia. Ethiopian Airlines ayaa Aadan Cadde Airport ka degtay afartan-saneeyo ka dib. Waa kulamo sabab u noqday in Abiy iyo Madaxweyne Muuse ay kulmi waayaan muddo ku simman toddoba bilood.
Kulamadaasi waxa ay sidaan farriin toos ah iyo mid dadban ba (Signalling in Diplomacy). Waxa ay horaysa ba xusayaan in siyaasadii arrimaha dibadda ee Ethiopia in wax weyni ay iska baddaleen. Waxa ay siddaa farrin odhanaysa ‘Waxa aanu ixtiraamaynaa midnimadda iyo madaxbanaanidda dhuleed ee Somalia”! Ma aha wax qarsoon ee tiraba waxay ay ku soo baxday labba war-murtiyeed. Farriintaasi waxa ay siddaa in qusuladdii Garoowe iyo Hargeisa ba lagu amray in ay dalka (Ethiopia) dib ugu noqdaan. Farriintaas diblomaasiyadeed waa mid u eg in ay adhaxda ka jabbinayso Somaliland iyo qaddiyadeedda!
Maxsuulka labbadda arrimood ee aan kor ku xusay waxa ay u badan tahay in ay abbuuraan waxa culuumta diblomaasiyaddu ay u taqaano ‘Coercive Diplomacy’! Waa in Somaliland lagu qasbo waxa aanay raalli ka ahayn, waa ba haddii waxa afka laga sheegayay ay run ba innaga ahaayeen e! Waa in la cabsi galliyo, la cuna-qabateeyo lagu na khasbo in ay hoos uga degto buurta ay fuushay, loogu na gooddiyo in laga soo tuuri doono haddii ay si miyir qabta uga degi waydo buurtaas. Tan caddaynteedda ugu horaysaa waxa ay ka bilaabmaysaa in farragalin ciidan lagu sameeyo dhulka Somaliland iyadoo xukuumadda aan waxba laga ogaysiin, sida immika ba ka socota Koonfurta Sool oo ciidan ka socda Kilalka Shanaad ee Ethiopia ay sugayaan ammaanka labbadii beelood ee halkaa ku diriray. Waxa xiggi doonta in albaabadda loo laabo amma heerkeedda hoos ba loo dhigo xafiiska diplomaasiyadeed ee Somaliland ku leedahay Addis Ababa.
Haddii ‘Coercive Diplomacy’ timaaddo Somaliland waxa ay ku yeelan saamayn guddeed oo aad weyn. Walow immika ba guddaheeddii ay sii kala irdhoobayso, aaminkii dawladnimadda lagu qabbayna aad mooddo in uu sii saqiirayo ba, hadda na xaalladan waa ay uga sii darri! Cid kasta oo salluug ka muujisa sida Somaliland wax uga socdaan meel kale kale ayaa looga gacan haaddin. Dabeed na Somaliland waa la tafaariikhaysan.
Allow siddii roon!